Broadcast Beat Magazine ကိုကြေငြာခြင်း - အချိန်အတွက် # IBC2014 အတွက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်းထုတ်ပြန်ချက် » အသံလွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းကြေညာ - #IBC2014 ဘို့အချိန်မှာတော့
အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း - www.broadcastbeat.com - သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ IBC Edition ကိုကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှု - အ 2014 IBC ပြရန်ကာလအတွင်းအသိပေးနှင့် In-touch နဲ့သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်။
ft ။ အဆိုပါ 11 IBC Show ကိုအသစ် - Lauderdale, FL (GCOMM) စက်တင်ဘာလ 2014, 2014 - "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" သူ့ရဲ့သုံးလတစ်ကြိမ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေ၏ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေမိတ်ဆက်အားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ထိပ်ဆုံးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုပါ: www.broadcastbeat.com.
စတင်ခြင်းထွက်သုံးလတစ်ကြိမ်, ဧပြီ 2014, ဇူလိုင်လ 2014 & နောက်ဆုံးတော့အောက်တိုဘာလ, 2015 အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပထမဦးဆုံးစက်တင်ဘာလ, 2015 အထူး IBC 2015 Issue, ဇန်နဝါရီလများအတွက်စီစဉ်ထားဒုတိယပြဿနာ, 2015, အတူ။
မဂ္ဂဇင်းများ၏ဤပြဿနာမှတဆင့်ရှာဖွေနေ, စံပုံနှိပ်-ထုတ်ဝေမဂ္ဂဇင်းကျေးဇူးတော်နိုင်ခြင်းအများအပြားဒြပ်စင်ရှိပါတယ် - ထိုသို့သောထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အထူးအဖြစ်အပျက်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပေးဖို့ပူ-လင့်များအဖြစ်-on ကို click နှိပ်ပြီး Beat ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်စကားကိုနားထောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အရမ်း embedded YouTube ကိုဗီဒီယိုများ,! ကြောင်းလေးစားမှုအတွက်, ဒစ်ဂျစ်တယ် edition မှာပုံနှိပ် edition မှာ Beats ရှိပါတယ်!
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းအတွက်အများဆုံးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူတစ်ဦး၏မျက်စိဖမ်းဒါမှမဟုတ်စတူဒီယို / ထုတ်လွှင့် / မီဒီယာလုပ်ငန်းတွင်စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည် Beat ။ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် End-အသုံးပြုသူများသည် - - ရိုးရိုးသားသားသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အကဲဖြတ်နိုင်သူ - ထိုမဂ္ဂဇင်းန်ထမ်းများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကူညီပေးသည်ထားတဲ့အတွင်းပေါ်လာသောထုတ်လုပ်သူများ, သူတို့နှင့်လယ်ပြင်၌လူအများအကြားအထူးကွန်နက်ရှင်လည်းမရှိ။
အတော်များများကထုတ်လုပ်သူမှန်မှန်နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲပြုသောပူဇော်သက္ကာဘို့ features တွေအပေါ်အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတအကြံပေးခြင်းကိုရှာခြင်းနှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat စတူဒီယိုနှင့်မီဒီယာအဖြစ်အပျက်နှင့်အခြားအချက်အလက်များအကြောင်းလူတိုင်းအကြောင်းကြားတဲ့မော်တော်ယာဉ်၌ဤအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံအားလုံးဝေမျှနိုင်ဖြစ်ခြင်းအသံလွှင့်များ၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် - အရာကျွန်တော်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကျူးလွန်နေကြသည်ဖို့ရည်မှန်းချက်။ အဆိုပါအသံလွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူ Beats အပေါ် Be!
အဆိုပါအသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းမှာတွေ့နိုင်ပါသည် Beat: magazine.broadcastbeat.com.
ညှိ-in ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ: listen.radionomy.com/broadcastbeat.m3u
(Listen-in ကို 24 နာရီတစ်ရက် /7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်!)
ထို့အပြင်၌၎င်း, မရရှိနိုင်ပါကသင်၏သက်ဆိုင်ရာ App Store မှာ NOW က, သင့် Device များ (အိုင်ဖုန်း, etc Android, Tablet များ, စ) ထုတ်လွှင့်အချက်အလက်များ၏လက်ရှိပို့စ် (သင်ဒီတော့အလိုရှိကြသည်ဆိုပါက) သင်အကြောင်းကြားစာကိုပေးတော်မူမည်အရာကိုမဂ္ဂဇင်းမိုဘိုင်း App ကို, Beat sport နိုင်ပါတယ် နှင့် The Show ကိုနှင့်ကျော်လွန်ပြီးမှာသတင်း။
လူအပေါင်းတို့သည်စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ Push ၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့များအတွက်အသုံးဝင်သော, ဒီပူနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် app ကိုမဂ္ဂဇင်း Beat ထုတ်လွှင့်ရန်သင့်အားညှိ-အတွက်လမ်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ယခု Download များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအဘို့အဆင်သင့်ရှိပါစေ။
အထူးအသားပေးဇာတ်လမ်းများထဲကနေနှင့် podcasts တွေကိုနှင့်ဗီဒီယိုသတင်းကိုချိုးဖောက် - မိုဘိုင်း device များအတွက် optimized, ဒီ slick app ကိုထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းက်ဘ်ဆိုက်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအပေါငျးတို့သညျကောငျးသောပစ္စည်းပစ္စယပြပေးလိမ့်မယ်။ ဒီစိတ်ကူးဆက်သွယ်ရေးအံ့ဩနှင့်အတူ "ဟုသိမှာ" မြား၏တဦးတည်းရှိစေသတည်း။
သင်သည်သင်၏သက်ဆိုင်ရာ app store ကိုမှာ app ကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်ဤနေရာတွင်နိုင်သည် www.broadcastbeat.com/broadcast-beat-mobile-application
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးလူတွေစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေနှင့် website တွင်အရေးကြီးသောရေးသားချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်သင်အကြောင်းကြားရန်သင့်မိုဘိုင်း device များအတွက်မိုဘိုင်း app ကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိခြင်းအားဖြင့်၎င်း, စတူဒီယို, ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းလေးနက်ဖြစ်ပါသည် Beat ။
2014 အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း အသားပေး IBC အထူး Edition ကို အဖွင့်ပြဿနာ စက်တင်ဘာလ Vol 1 အဘယ်သူမျှမ 1 2014-09-11
ယခင်: သဟဇာတနယူး Polaris ပလေးအောက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Suite ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: အသံကျယ်မီတာ Solutions ၏ Range အတူ 2014 IBC Show ကိုပံ့ပိုးဖို့ RTW